SUJET: Kapôty, sarotra tadiavina
Kapôty, sarotra tadiavina Il y a 2 Taona, 4 Volana Karma: 1
Asa na za no sendran'ny mpivarotra tsy misy kapôty sa ahoana? fa dia tsy misy foana izay mpivarotra alehako rehetra, marina e! YES aloha efa niakatra ny vidiny avy eo tsy nisy intsony, ilay protector aloha dia tsy lazaina intsony, sa ve hoe? inona no fampiasan'laisany?
Re: Kapôty, sarotra tadiavina Il y a 1 Année, 10 Volana Karma: 0
efa mameno an'i Gasikara ny kpoty zao a! misy gratis d misy amidy. Preservatif foana ihany no fiarovana tsara indrindre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!